होशियार बनौ ! चिसोमा बच्चालाई यसरी हुनसक्छ संक्रमण
२३ पौष, २०७५
काठमाडौं । मौसम परिवर्तन भएसँगै बालबालिकामा रुघाखोकी र भाइरल इन्फेक्सनको समस्या देखिन थाल्छ । बालबालिकाको इम्युन सिस्टम कमजोर हुनाले रुघाखोकीको चपेटामा उनीहरु सजिलै आउन सक्छन् । सामान्य रुघाखोकी लाग्ना साथ अभिभावक बालबालिकालाई औषधि दिन हतारिन्छन् । तर औषधि दिनुभन्दा अगाडि आफूले कुन औषधि दिँदै छु, यसको बेला भएको छ कि छैन जस्ता कुरामा ध्यान दिनु जरुरी छ ।
सामान्य रुपमा नै पाइने यस्ता औषधिमा उल्लेख गरिएका तथ्यहरु पढेर निर्देशनअनुसार त्यसको मात्रा सावधानीका साथ पालना गरौं ।
बालबालिकालाई उमेरअनुसार नै औषधि दिनु स्वस्थकर हुन्छ । त्यस्तै, बालबालिकालाई लागेको रोगको लक्षण पहिचान गरेर सोहीअनुसारको औषधि दिनु अत्यन्त आवश्यक छ । अतिरिक्त औषधि दिनाले साइड इफेक्ट हुनुका साथै बालबालिकाको प्रतिरोधक क्षमतामा पनि यसले ह्रास ल्याउन सक्छ ।
कतिपय अभिभावकले बालबालिकालाई औषधि खुवाउँदा बिर्कोबाट अथवा सोझै औषधिको सिसीबाट मात्रा विचार नगरी खुवाउने गर्छन् । यो गलत तरिका हो । बालबालिकालाई औषधि खुवाउँदा सही मापन गरेर खुवाउनुपर्छ । यसको लागि चम्चा अथवा स्केल भएको बिर्कोको प्रयोग गर्न सकिन्छ ।
एस्पिरिन र निद्राको औषधि नदिऔं
कहिले पनि २० वर्षभन्दा कम उमेरका बिरामीलाई एस्पिरिन अथवा एस्पिरिनयुक्त औषधि दिनु हुँदैन । त्यस्तै, निद्राको लागि एन्टिथिस्टेमाइन्स जस्तै डिमेट्याप, बेनाड्रिल आदि दिनुहुँदैन ।
एकै समयमा भिन्न औषधि नखुवाऔं
त्यस्तै, एकै समयमा एकभन्दा बढी औषधि मिलाएर खुवाउनु हुँदैन । एकभन्दा बढी औषधि खुवाउनुपरेको अवस्थामा केही समयको अन्तरालमा ती औषधि दिनु राम्रो हुन्छ ।
बालबालिकालाई रुघाखोकी लागेमा यस्ता व्यवहार अपनाऔं
बालबालिकाले ठूलाबडालाई देखेर नै हरेक कुरा सिक्छन् । त्यसैले यी बालबालिकालाई स्वस्थ राख्न आफूले पनि निम्नलिखित व्यवहार अपनाऔं र बालबालिकालाई पनि गर्न लगाऔं :
सधैं साबुन पानीले हात धोऔं र बालबालिकालाई पनि धुन सिकाऔं । सफा रुमाल अथवा तौलीले हात पुछौं र पुछ्न लगाऔं । यसले रुघाखोकीको संक्रमणको सम्भावना कम हुन्छ ।
खोक्दा अथवा हाच्छ्युँ गर्दा आफ्नो मुख र नाक छोप्न रुमाल अथवा टिस्युपेपर प्रयोग गर्नुपर्छ ।
हातले आफ्नो आँखा, नाक, मुख छुने, चलाउने, औंला चुस्ने बानी बालबालिकाको हुन सक्छ । एच१ एन १ भाइरस यसरी नै सर्ने भएकाले बालबालिकाको यस्तो बानी हटाउने कोसिस गरौंं ।
रुघाखोकी भएका बिरामीको नजिक बालबालिकालाई नलैजाऔं । आफूलाई रुघाखोकी लागेको छ भने उपचार गरेर अथवा संक्रमण नहुने तरिका अपनाएर मात्र नजिक जाऔं । घरमा कोही बिरामी छन् भने सकेसम्म उनको उपचारको लागि अलग स्थान छुट्याऔं, सम्भव नभए बिरामीबाट बालबालिकालाई कम्तीमा ६ मिटरको दूरीमा राखौं । बालबालिकालाई भाइरलले छुन नसकोस् भन्ने कुरामा ख्याल राख्नु जरुरी छ ।
घरआँगन, बालबालिकाले छुने, चलाउने सामान, जस्तै, रिमोटकन्ट्रोल, कम्प्युटर, मोबाइल, किबोर्ड आथि सबै बाहिरी भाग सधैं सफा राखौं ।
बालबालिकालाई रुघाखोकी अथवा ज्वरो केही कम हुने बित्तिकै विद्यालय पठाउने, डुल्न खेल्न दिने चलन छ । यस्तो गर्दा रोग पुनः बल्झिन सक्छ । त्यसैले उनीहरुलाई रोग ठीक भए पनि करीब २४ घण्टा घरमा नै आराम गर्न लगाऔं ।
-विभिन्न एजेन्सीहरुको सहयोगमा
अष्ट्रेलियामा अत्यधिक गर्मी, घर बाहिर ननिस्कन सरकारको अपिल
सबै निजी स्कुललाई गैरनाफामूलक बनाउन सिफारिस
१ नं प्रदेशका १४ जिल्लामा २४ घण्टामा १ हजार २ सय १८ वटा सवारी साधन कारवाहीमा
महिला टी २० स्मास क्रिकेटमा नेपालको लगातार दोस्रो जित
डा. गोविन्द केसीको १६ औं सत्याग्रहकोे समर्थनमा ज्येष्ठ नागरिककोे ¥र्याली